आफ्नैबाट बलात्कार – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ पुष १२ गते बिहीबार १७:०१ मा प्रकाशित
पोखरा, ताण्डव न्यूज ।
बलात्कारको पछिल्लो वर्षका तथ्यांकहरु नियाल्दा घटनाहरु सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ । हरेक वर्ष तथ्यांक बढिरहँदा न्यूनीकरण र न्यायका लागि आवाजहरु ठूलो स्वरमा नउठेका होइनन् ।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएसँगै देशमा न्याय पाउँ भन्दै सम्पूर्ण नेपाली सडकमा ओर्लिए । यसअघि पनि बलात्कारका घटना नभएका भने होइनन् । कति घटना बाहिर आउँथे, कतिपय घटना गुपचुपमै सकिन्थ्यो ।
बलात्कार स्वीकारेका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले केरकार गर्दा उनीहरुको कारण अचम्म अचम्मका सुनिन्छन् । अधिकांशले मदिरा र लागुपदार्थ सेवनकै कारण बलात्कारका लागि मनोभावना पैदा भएको बताउँछन् । कतिपयले अश्लिल भिडियो हेरेपछि, कतिपयले रिसिइविकै कारण पनि यस्ता घटना घटित भएको प्रहरी बताउँछ ।
देशका छोरी चेलीको सुरक्षाको माग गर्दै आवाज चर्काइरहँदा, यहाँ घरमै असुरक्षित रहेको समेत पाइएको छ । अर्थात् छोरी चेली परिवारजनबाटै (हाडनाता करणी) बलात्कारको शिकार हुनुपरेको छ । आफ्नै बुवा, हजुरबुवा, अंकल लगायतबाट पीडित बालिकाहरुका केही घटना यहाँ समावेश गरिएको छ ।
पोखरा–१० मा उनी झण्डै दुई दशक अघि आएका थिए । प्रमिला मोरङबाट रमेशसँग विवाह गरेर भागेर पोखरा आएकी थिइन् । पोखरामा कोठा भाडामा लिएर उनीहरु दिन विताई रहेका थिए ।
पहिलो सन्तानको रुपमा मेनुका जन्मिन् । रमेश डाइभर थिए र प्रमिला ज्याला मजदुरी गर्थिन् । समय वित्दै जाँदा उनीहरुमा मनमुटाव सुरु भयो । त्यही झगडाको विउले उनीहरु विच सम्बन्ध–विच्छेद गरायो । त्यसपछि प्रमिला र छोरी मेनुकासँगै बस्न थाले ।
ज्याला मजदुरी काम गर्ने क्रममा प्रमिलाको भेट नरेशसँग भयो । सँगै काम गर्ने क्रममा उनीहरु नजिक भए । उनीहरु विच प्रेम सम्बन्ध कायम भयो । नरेस विवाहित थिए तर पनि उनी प्रमिलासँग दोस्रो विवाह गर्न चाहन्थे । नभन्दै नरेसको इच्छा पूरा भयो । उनीहरु विवाह बन्धमा बाँधिए ।
नरेश प्रमिलाकहाँ बस्न थाले । आमा प्रमिलाले दोस्रो विवाह गरेको १९ वर्षीय छोरी मेनुकालाई मन परेको थिएन । एउटै कोठा अनि तीन जना बस्नु पर्दा मेनुकाले निकै अप्ठ्यारो महशुस गरेकी थिइन् । मेनुकाले आफू मामा घर बस्न जाने भनेर आमासँग कुरा राखिन् । प्रमिलाले पनि ‘हुन्छ पहिला म कुरा गरेर आउछु अनि तिमी जाउली’ भनेर छोरीलाई सम्झाइन् ।
२०७४ साल भदौ ८ मा प्रमिला माईत मोरङ पुगिन् । त्यही रात मेनुकाले नसोचेको घटना घट्यो । बुवा नरेस रक्सीले मातेर आएका थिए । मेनुका आफ्नो सानो खाटमा सुतिरहेकी थिइन् । त्यत्तिकैमा नरेश उनकै खाटमा गए ।
रातभर मेनुलाई आफ्नो शिकार बनाए नरेशले । मेनुकासँग रुनु बाहेक अरु विकल्प रहेन । उनले घटना बारे कसैलाई भनिन । तीन दिनपछि आमा प्रमिला आइन् । मेनुकाले आमालाई सबै कुरा बताइन् । तर मेनुकाले सोचेको भन्दा फरक प्रतिक्रिया आयो आमाबाट । ‘यस्तो भन्न हुदैन्’ भन्दै प्रमिलाले उल्टो मेनुकालाई गाली गरिन् ।
आफ्नो श्रीमानले गरेको अपराधलाई उनले लुकाइन् । केही हप्ता बितेपछि घटना प्रमिलाको पहिलो श्रीमान रमेशको कानमा पुग्यो । रमेश प्रमिलाको घर आई पुगे उनीहरु विच झगडा भयो । रमेशलाई उल्टो कुटपिट गरि फर्काइयो ।
पछि रमेशले छोरी मेनुकासँग सोधे तर मेनुका त्यस विषयमा केही बोल्न चाहिनन् । प्रमिलाले घटना लुकाउन छोरी मेनुकालाई मामा घर पु¥याइन् । दोस्रो श्रीमान नरेशलाई जोगाउन प्रमिलाले घटना लुकाएर ठूलो अपराध गरिन् ।
गोरखाकी अञ्जली १६ वर्षकी थिइन् । उनकी आमा माइत गएकी थिइन् । घरमा बुवा र अञ्जली मात्रै ।
बिहान साढे ७ बज्दै गर्दा बुबा अञ्जली भएको कोठामा आइपुगे । ‘के गर्दै छौ छोरी ?’ भन्दै अञ्जली बसेको खाटमा बसे बुबा नेत्रबहादुर । हातले ढाडमा धाप मार्दे गफिन खोजेजस्तो गरे ।
यी कुरा सामान्य हुन्, बुबा र छोरी बीच । अञ्जलीलाई पनि सामान्य नै लाग्यो । बुबाको माया ममताले मख्ख पर्दै मुस्काएकी थिइन् । तर नेत्रबहादुरले छोरीप्रति कु दृष्टि लगाइसकेको थियो ।
अघि ढाडमा धाप मारेका नेत्रबहादुर विस्तारै अञ्जलीको संवेदनशील अंगमा हात लैजान खोज्दै थिए । अञ्जलीले अप्ठ्यारो मानेपछि भनिन् ‘के गर्नुभएको बुवा यस्तो ? यस्तो नगर्नु न ।’
क्रुर मानसिकता भएको ४९ वर्षीय नेत्रबहादुरले अब भने जर्बजस्ती गर्न थाल्यो । आफैंले हुर्काएको सन्तानलाई करणी गरेपछि गाउँतिर निस्किन्छु एकछिन भन्दै घरबाट बाहिरियो ।
अञ्जली घरमै रोएर बसिरहिन् । ‘आफ्नै बुबाले बलात्कार गर्यो भनेर कसलाई सुनाउनु ?’ उनी त्यहीँ घटना सम्झँदै भक्कानिइ रहन्थिन् । यता बुबाले ‘कसैलाई भनिस् भने मारिदिन्छु’ सम्म भन्न भ्याएका थिए । धम्कीको डरले अञ्जली कसैलाई भन्न चाहन्नथिन् यो घटना ।
टोलाउने, झस्किने गर्थिन् । उनको फरक व्यवहार देखेपछि मिल्ने साथीले सोधिन् ‘के भएको तलाई ? केही भयो र ?’ । अञ्जलीले रुँदै क्रुर बुबाको हर्कत सुनाइन् । कल्पनासम्म नगरेको घटना सुनेपछि उनकी साथीसमेत अक्कबक्क भए । र, साथीकै माध्यमबाट घटना बाहिर आयो ।
१६ वर्षीय बालिका बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा (बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–६ ताकुकोट ठेगाना) ४९ वर्षीय बाबु गिरफ्तार परेका छन् ।
बालिकाले असोज १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा बुबाविरुद्घ मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । असोज १० गते नै पीडकलाई गिरफ्तार गरिएको थियो ।
बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण भदौ १० गते जिल्ला अस्पतालमा भएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा रहेको भन्दै भदौ ११ गते मात्र प्रहरीले घटना सार्वजनिक गरेको थियो ।
बागलुङकी हरिमायाले सोही ठाउँका विक्रमसँग बिहे गरेकी थिइन् । बिहे गरेको केही समयपछि हरिमायाको कोखबाट छोरी जन्मिइन् ।
सुत्केरी हुँदासमेत विक्रमले श्रीमतीको कुनै ख्याल गरेनन् । विक्रमको दिनहुँ रक्सी पिउने बानीले आजित थिइन् हरिमाया । पतिप्रेम शून्य बराबार थियो । हेरचाह त परै जाओस्, सुत्केरी नओभाउँदै कुटपिट गर्थे विक्रम ।
हरिमाया सबै व्यवहार सहँदै छोरी हुर्काइन् । कक्षा ३ मा अध्ययन गर्दा ७ वर्ष पुगेकी थिइन् छोरी ।
घटना असोज १७ को हो । छोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाएर हरिमाया माइत गएकी थिइन् । तर, उनै बाबुले त्यस रात छोरीमाथि राक्षसी हमला गरे ।
भोलिपल्ट विक्षिप्त अवस्थामा छोरी स्कुल पुगिन् । उनले राम्रोसँग पढ्न नसकेपछि शिक्षकहरुले सोधे । ‘रक्सी खाएर आएपछि बाले मलाई रातभर नराम्रो काम गर्नुभयो । म कति रोएँ, अहँ छोड्दै छोड्नुभएन’ उनले रुदै भनिन् ।
बालिकालाई तत्कालै अस्पताल पु¥याइयो । भाग्न खोजीरहेका किरणलाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्याे । उनी अहिले बागलुङ कारागारमा छन् ।
घटना २०७० को हो । कपिलवस्तुका जीवन परियारको छोरी ७ वर्षकी थिइन् । जीवनकी श्रीमती पोइला गएपछि छोरीलाई सँगै राख्दै आएका थिए । ढुंगा गिट्टीको काम गर्ने जीवन खोलातर्फ लाग्दै गर्दा छोरीलाई देखे ।
गाउँ नजिकैको नर्सरीमा खेलिरहेको देखेपछि जीवनले छोरीलाई बोलाए । बुबाले नै बोलाएपछि नकार्ने कुरै भएन । यमकुमारी बुबा नेर पुगिन् । बुबा जीवनले छोरीलाई सिधै जंगलतर्फ लिएर गए ।
केही समयपछि ७ वर्षकी यमकुमारी रातोपिरो हुँदै आइन् । यमकुमारी आत्तिएको देखेपछि त्यहाँ रहेकी सुस्माले के भयो भनेर सोधिन् ।
अबोध यमकुमारीले घटनाको विस्तृत यसरी सुनाएकी थिइन् ।
‘बुबाले जंगल लिएर जानुभयो । झाडीमा लानुभयो । मेरो र आफ्नो कट्टु खोली मात्तिनु भयो । बुबाले मेरो पिसाब फेर्नेमा आफ्नो पिसाब फेर्नेले घोच्नु भयो । अनि छिराउनुभयो । दुख्यो भन्दा पनि छोड्नुभएन । पछि फर्किने बेलामा, कसैलाई भनिस् भने पिट्छु भन्नुभयो ।’
घटना प्रहरी हुँदै अदालत पुगेर फैसला भएको थियो ।
(गोपनियताको लागि घटनामा संलग्नहरुको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।)
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा १ सय ६९ जना छोरीहरु आफ्नै बाबुको दुष्कर्मको शिकार भएका छन् । ३५ जनामाथि आफ्नै हजुरबाले निच हर्कत गरेका छन् । यी पीडितमध्ये कतिपय मानसिक समस्यामा जकडिएर बसेका छन् भने केही एनजीओ आइएनजीओको संरक्षणमा पुगेका छन् ।
तथ्यांक नियाल्दा पीडित ५ महिलामध्ये १ जनाले मात्र यस्ता घटना बाहिर लिएर आउँछन् । २ तिहाइ महिलाहरु हिंसा सहेरै बसेका छन् । अर्को डरलाग्दो तथ्यांक के छ भने, ६५ प्रतिशत महिला बालबालिका घरबाटै हिंसामा पर्छन् भने ३१ प्रतिशत छिमेकीबाट ।
तथ्यांकहरुबारेको वेभसाइट नेपाल इन डाटाका अनुसार सन् २०१७ मा २ हजार २ सय ६४ वटा बलात्कारका घटनाहरु दर्ता भए । २०१८ को मध्ये जुलाई र अक्टोबरसम्म ८ सय ५९ बलाकारका घटना भएका छन् । यसरी नियाल्दा, २०१७ मा दैनिक ६ वटासम्म बलात्कारका घटनाहरु भएको देखिन्छ ।
यस्ता कारणले पनि हिंसा भोगिरहेछन् महिला
नेपाल इन डाटाको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने, १० मध्ये ३ महिला विभिन्न कारण श्रीमानबाट हिंसा भोगिरहनु परेको छ ।
खाना मिठो नपकाएको, डढाएको, जवाफ फर्काएको, श्रीमानलाई नभनी कतै बाहिर गएको, छोराछोरीलाई उचित हेरचाह नगरेको र चाहेको समयमा सम्भोगका लागि तयार नभएको विषयलाई लिएर श्रीमानहरुले हिंसा गर्ने गरेका छन् ।
यतिसम्म की, ६ प्रतिशत नेपाली महिलाले गर्भवती अवस्थामासमेत हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।
समाजमा पुनस्र्थापन हुनै गाह्रो हुन्छ
इन्स्पेक्टर चन्द्रा गुरुङ
महिला सेल प्रमुख
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की
बाबुबाटै प्रताडित भएका छोरीहरुको कुनै पनि पुरुष मान्छेमा विश्वास गर्न छोड्छन् । हाडनाता बलात्कारमा प्रायः बालिकाहरु पीडित हुन्छन् ।
बाबुले गरेको यस्तो घृणित कार्य आमाले पनि नपत्याउने वातावरण हुन्छ । यदि थाहा पाइहाले पनि पीडितलाई समाजले नै लान्छाना लगाउने, घृणा गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले पीडितहरु घटना लुकाएरै बस्न बाध्य हुन्छन् ।
यस्ता पीडितले डरलाग्दो सपना देख्ने, असुरक्षाको विषयमा जहिल्यै चिन्तित हुने, ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने, भिडभाड मन नपराउने हुन्छ । समाजमा पनि उनीहरु पुनस्र्थापन हुन गाह्रो हुन्छ ।
कानुनमा के छ ?
अहिलेको कानुनले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जर्बजस्ती करणी गरेको अवस्थामा १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ ।
त्यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा १४ देखि १६ वर्ष, १४ वर्षभन्दा बढी र १६ भन्दा कम उमेरमा १२ देखि १४ वर्ष र १६ देखि १८ वर्षको भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
१८ वा सोभन्दा बढी उमेरका महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।
कसैले हाडनाताकी महिलालाई करणी गरेमा निजलाई हाडनाताको करणीमा हुने सजाय थप हुन्छ । सौतेनी आमा छोरा, बाबु छोरी, सहोदार दिदीभाइ एउटै हाँगाका ससुरा बुहारी, देवर भाउजू लगायत हाडनाता करणी भएको अवस्थामा ४ देखि १० वर्षसम्मको कैद र ४० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना थपिनेछ ।
त्यस्तै, वैवाहिक बलात्कारमा ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
शुक्रबारदेखि पुनः वर्षा र हिमपातको सम्भावना
‘भागरथी हत्याका दोषी पक्राउ नजीक’
लभ्ली डाँडामा झुण्डिएका जोडीको पहिचान खुल्यो
लमजुङमा घरभित्र पहिरो पस्दा तीनको मृत्यु, तीन घाइते
पर्यावरण जोगाउन मेयर साईकल दौड, वालिङका मेयर खाँड बने च्याम्पियन